လူကြီးများအတွက်အရင်းအမြစ်များ | အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ - မေတ္တာသည်လိင်နှင့်အင်တာနက်
ပင်မစာမျက်နှာ သင့်အကြောင်း လူကြီးများအတွက်အရင်းအမြစ်များ
'အရွယ်ရောက်သူများအတွက်အရင်းအမြစ်များ' တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းသောအပြုအမူကိုရှောင်ရှားလိုသူတစ် ဦး အတွက်ကောင်းသောအစအချို့ကိုဖော်ပြထားသည်။
စတင်ရန်တစ်ဦးကအကြီးအရာအရပ်ကိုဂါယူဆပါသည်, ထူထောင်သောသူမူကားယောက်ျား၏ပုံပြင်ကိုနားထောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် reboot Nation။ ဤတွင်အပေါ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာစကားပြောဂါဖြစ်ပါသည် ပုလ်လိမ်: အဆိုပါလူငယ် Boys မှညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏ထိခိုက်မှုနှင့်အမျိုးသားများအတွက် ဝါရှင်တန်ဒီစီ (12.30) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်ခြင်းအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရေးစင်တာသည်။
သုတေသနပြဿနာများနှင့်အတူနံပါတ်များမြင့်တက်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဒီ website ကသင့်လျှင်သင်ထွက်အလုပ်လုပ်ကူညီနိုငျကွောငျးသတငျးအခကျြကိုထောက်ပံ့ပေး အသုံးပြုမှုပြဿနာဖြစ်လာပြီ နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သင်သည်တတ်နိုင် အဲဒီအကြောင်းပြုပါ။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ထိခိုက်နေသည် စိတ်ကျန်းမာရေး or ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး? ထိုသို့ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြစ်သည် ဆက်ဆံရေး? ဒါကြောင့်ရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုထိခိုက်စေလျက်ရှိသည် စုရုံး သင့်ရဲ့လေ့လာမှုများအပေါ်သို့မဟုတ်အလုပ်မှာ? သင်ယခင်ကတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းပစ္စည်းကိုကြည့်ရှုသည် စက်ဆုတ်ဘွယ်ဖြစ်သော သို့မဟုတ်မ သင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာကိုက်ညီ?
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှာ အချည်းစည်းအမှန်တရားစီမံကိန်း အင်တာနက်ညစ်ညမ်း (2.45) ၏ဥဩခေါ်ဆိုခကိုရှောင်ရှားဖို့ဘယ်လိုပေါ်စိတ်ကူးများစာရေးနှင့်အတူဂရိဒဏ္ဍာရီအနေဖြင့်ဂျေဆန်နှင့် Ulysses အပေါ်အခြေခံပြီး foillowing တိုတောင်းသောကာတွန်းထုတ်လုပ်ပါပြီ။